Hiran State - News: Wararka ka imaanay dalka Turkiga ayaa sheegaya in wasiirka qorsheynta iyo Shiikh Sharii fhalkaasi midkast ala tagay report u gaar ah.
Wararka ka imaanay dalka Turkiga ayaa sheegaya in wasiirka qorsheynta iyo Shiikh Sharii fhalkaasi midkast ala tagay report u gaar ah.
HS:-Wararka ka imaanay dalka Turkiga ayaa sheegaya in wasiirka qorsheynta TFGda iyo Shiikh Shariif halkaasi midkasta la tagay report u gaar ah iyadoo lagu wado in uu midkasta dhigiisa dalkaas farta ka saaro sida madaxweynah iyo wasiirka qorsheynta Turkiga.
Kadib qilaaf gacan ka hadal gaaray oo magaalada Mogdisho ku dhax maray wasiirka qorsheynta TFGda Cabdullaahi Godax Bare oo isagu wasiirnimada ka sokow gudoomiye u ah kooxda ka shaqeyneysa Road- Mapka ee loogu tala galay in lagu xukumo shacabka Mudug oo kaliya maadama aysan ku jirin Somalida inteeda kale ayaa isagu ka mid ah safarka uu dalka Turkiga ku joogo Shiikh Shariif oo doonaya inta uu wadankaasi joogo inuu kula heshiiyo wasiirka qorsheynta. laakinse xaalku heshiis wuu ka weyn yahay waxaana soo baxaya warar horu dhac oo sheegaya in laga yaabo in Shariifka shafarkaan waji gabax kala kulmo iyadoo ay dowlada Turkiga aad u dareemi doonto in TFGdu aysan hal meel wax iskula wadin.
Bal aanu dul marno wararkii ugu danbeyey ee inaga soo gaara magaalada Ankara oo ah goobta ay wafiga Shariif Shaiikh Ahmed ku sugan yahiin ayaa shegaya in Shariifka uu doonayo inuu warbixin sida la sheegay ka kooban dhawr bog u gacan galin doono madaxweynaha dalka Turkiga Abdalla Qul taasi oo uu Shariifka ku codsanayo inuu dowlada Turkiga ka helo ciidamo 15 kun ah si uu meesha uga saaro dowlado badan oo daneeya arimaha Somaliya iyo kuwo deris la ah, sido kale waxuu doonaya in dowlada Turkiga ay ku soo wareejiso dhaqaalo ay u aruuriyeen wadamada Muslinka shacabka Somaliyeed oo lagu qiyaasay ku dhawaad 400 Million oo uu codsaday in laga siiyo 200 Million kadibna dalka Turkiga kula heshiiyo inuu xiriirka u jarayo dhawr wadan oo laga xusay Ethiopia iyo Mareykanka.
Laakinse markaad dhinaca kale ka eegto wasiirka qorsheynta warbixin midaas ka bedelan ayuu wataa oo ah in aysan siyaasada Somaliya hada fadhiyin dowladuna aysan wadashaqeyn ka dhaxeyn isagoo tusaale u soo qaadanaya inuu yahay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah hadane ah gudoomiyaha qorshe howleedka Road map-ka hase yeeshee aysan arintaas u dhameyn Somaliweyn oo dastuurka qabyo qoraalka ah iyo arinta Road Mapka lagu soo koobay oo kaliya degaano gaar ah amaba qeybo ka mid ah Somaliya lagana yaabo in uuba howsha uu ka hayo TFGda faraha kala baxo marka uu ururada daneya arimaha Somaliya wada gaarsiiyo warbixintaan.
Hadaba waxaa isweydiin leh maxuu yahay isbedelka siyaasadeed ee ku dhacay malmahan wasiirka qorsheynta iyo qilaafkan kala dhaxeeya Shariifka.
Hadaan nuxurka qilafka soo koobno waxaa ka mid ah fashilkii ku yimid arintii Jowhar iyo Hiiraan oo ay siweyn ugu fashilmeen kadib diidmo aan yareyn oo ay kal ahoryimaadeen shacbaka Hiiraan. sidoo kale wasiirka qorsheynta waa nin gudoomiye looga dhigay howl ay dadkiisa ka maqan yahiin sida shirkii koowaad ee wadatashiga oo aan haba yaraatee lagu xusin Somali badan oo ay reer Hiiraan ku jiraan waa deegaankii uu ka soo jeday oo uu xilkaan ku helay.
dadkii hore ee xigmada badnaa ee qarniyaal ka hor ku noolaa dhulka Somaliya marka ay doonayan iney qof ugu yeeraan nacas taasi bedelkeeda waxey dhihi jireen war maxaa ku helay xoolaha ayaaba hadii ay mooro ku jiraan oo uu Waraabe ugu soo galo marka ay cararan qaar baa garta iney dib ugu soo laabtaan xeradee intaa magaran weysay ayey dhihi jireen.
Hada wasiirka hal mar ayuu is arkey isagoo dhax taagan reer Mudug oo u kala deb qaadaya meel ay dadkiisa ka maqan yahiin marka hada xaalkiisu waa neef gowracan geed kama waabto inta uusan xafiiska ka tagina ama Shariifaa noqonaa nin waxii yeel la yiraahdo yeela inta uu dantiisa ka gaarayo ama wasiirkaan howsha ay dadkiisa ka maqan yahiin faraha ayuu kala bixi doona oo sida hada lagu soo waramayo wuu is casili doonaa.
Hadii sida lagu soo waramo wax u dhacaan waxa hagad galidoona dhaqaalahii uu Shariifka is lahaa dhib la,aan qaado ee isku soo sharaxa adiga iyo kooxda Allaa Shiikh la baxday mustaqbalka madama ay hada dhawr bilood mudadiisa uga egtahay oowadanka doorasho ka dhaceyso.markaadse dhinac kasta ka eegto sidey wax u socdan waxaa jiro wasiiro dhawr ah oo arintaan kula jira wasiirka qorsheynta.
Guud ahaan siyaasada xaalka TFGda waxuu u muuqdaa mid uun shaqeyn doono maalmo la tirinayo qilaafka ugu weyna waxuu iskugu biyo shuban doonaa Shariifka iyo C/wali Gaas. Shariif Shiikh Ahmed aya isagu siyaasad ahaan hada ku soo aruuray koox yar oo Allaa Shiikh maadama aysan jirin wax siyaasad ah oo kala dhaxeeya inta badan shacabka koofurta Somaliya oo ay reer Hiiraan ugu horeeyaan.
· admin on October 21 2011 01:53:47 · 0 Comments · 1905 Reads ·
14,667,246 unique visits